Mahdi Guuleed “Qoraalkii Musharaxiinta Madaxweynaha 2020/21 waxaa ka muuqda quus iyo niyad-jab” – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Mahdi Guuleed “Qoraalkii Musharaxiinta Madaxweynaha 2020/21 waxaa ka muuqda quus iyo niyad-jab”
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka Mahdi Maxamed Qoraal khadar ayaa ka hadlay Qoraal ay soo saareen Musharaxiinta Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya oo ay uga soo horjeedan Guddigyada Doorashooyinka ee la magacaabay.
Qoraal uu soo saaray Mahdi Guuleed ayuu Qoraalkii Maanta ee Musharaxiinta Madaxweynaha Soomaaliya ee 2020/2021 ku tilmaamay mid uu ka muuqday kalsooni-darro, quus iyo niyad-jab.
Sidoo kale Mahdi Guuleed ayaa sheegay inuu garan waayay farqiga u dhaxeeya Guddigii Doorashada heer Federaal iyo Somaliland ee 2016 iyo kuwa 2020 ay soo kala magacaabeen dowladda Federaalka Soomaaliya iyo maamul Goboleedyada dalka.
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Xukuumadda ayaa ayaa sheegay in Guddiyada Doorashada haatan iyo kuwii 2016 ay labadaba kasoo dhex muuqdeen wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo labada xafiis u kala shaqayn jiray ama shaqeeya.
“Waxa aan aad ula yaabay qoraal sida la sheegay ka soo baxay mas’uuliyiin ku isman murashaxiinta Madaxweynaha ee doorashada 2020/21. Qoraalkaas oo lagu duraayo Guddiyada Doorashooyinka, waxaa ka muuqday kalsooni-darro, quus iyo niyadjab. Waxa aan garan waayay faraqa u dhaxeeya Guddigii Doorashada heer Federaal iyo Somaliland ee 2016 iyo kuwa 2020 oo ay labadaba kasoo dhex muuqdeen wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo labada xafiis u kala shaqayn jiray ama shaqeeya” ayuu yiri Mahdi Guuleed.
Musharaxiin dhowr ah oo kamid yihiin Xasan Sheekh, Sheekh Shariif iyo Xasan Cali Kheyre ayaa waxa ay ku qaadaceen inay ka qeyb galaan doorasho ay ugu yeereen inay tahay boob iyo ku shubasho oo ay maamulayaan Guddi ay ku tilmaameen shaqaale Dowladeed iyo saraakiil ciidan oo ka tirsan NISA.
Guddoomiye Shuute oo Digniin Culus u diray laamaha amniga Dowladda
Wafdi ka socday dowladda Federaalka oo gaaray Jowhar + ujeedka